Ihe ịrịba ama 6 Ọ bụ Oge ịkụnye Software Nchịkọta Gị | Martech Zone
Ihe ngwanrọ ngwanrọ arụpụtara nke ọma (BI) bụ ihe dị oke mkpa maka nzukọ ọ bụla chọrọ ịchọpụta ROI nke ọrụ ha n'ịntanetị.
Ma ọ bụ nsuso oru ngo, ozi ịre ahịa email, ma ọ bụ ịkọ amụma, ụlọ ọrụ enweghị ike ịba ụba na-enweghị nsuso mpaghara nke uto na ohere site na ịkọ akụkọ. Ngwunye ngwanrọ ga-ewe oge na ego naanị ma ọ bụrụ na ọnweghị ewepu ezigbo etu esi azụ ahịa.
Lelee ihe isii ndị a iji dobe otu nchịkọta ngwanrọ na-akwado nke ka dị irè.
1. Mgbagwoju anya nke onye ọrụ
Tupu ị tinye aka na sọftụwia BI, mee ka ndị ọrụ gị nwalee ya wee hụ ma enwere ike ijikọ interface ndị ọrụ na arụmọrụ ha. A clunky ọrụ interface nwere ike n'ezie jiri nwayọọ na-akọ usoro: ọrụ nwere na-eso a convoluted ụzọ napụta results. Otu dị iche iche na-arụkọ ọrụ ọnụ na sọftụwia BI kwesịrị ịnwe usoro doro anya, nke na-agbanwe agbanwe ka mbọ ndị mmadụ ghara ịba ụba na igbu oge.
2. Oke data
Ọdịda ọzọ maka ọtụtụ ihe ngwanrọ BI bụ na mmemme a na-ewepụta data buru oke ibu na-enweghị ịsụgharị ya n'ime nghọta amamịghe. Ndị nlekọta na ndị isi otu egwuregwu ga - enwe ike ịkọwapụta ngwa ngwa ebe ndị na - eme ọfụma na ndị chọrọ nlebara anya. N'ihu ọtụtụ mgbidi, ndị ọrụ nwere ike igbu oge dị oke ọnụ iji chịkọta akụkọ ndị a pụrụ ịghọta.
3. "Otu hà dabara niile"
Ọ bụghị azụmahịa niile na-agba otu ọrụ ahụ, nzukọ ọ bụla nwere usoro ọ bụla akọwapụtara maka mkpa ya. Ihe ngwanrọ BI kwesịrị ịbụ nke a na-ahụkarị, yabụ ndị njikwa nwere ike ịza mkpọtụ ma lekwasị anya nchịkọta dị mkpa. Iji maa atụ, ụlọ ọrụ ndị na-enye ọrụ adịghị mkpa inyocha metrik na mbufe na ị nweta, ọ bụrụ na ha jikwaa ngwa ahịa ọ bụla. Nchịkọta kwesịrị itinye ngalaba site na iji data.
4. Oke ọkachamara
Ka ụlọ ọrụ na-achọ ihe omume BI zuru oke, ha kwesịrị izere nchịkọta ngwá ọrụ na-elekwasị anya kwa. Ọ bụ ezie na usoro mkpesa nwere ike ịka nka na usoro arụmọrụ ndị ọrụ, ọ nwere ike bụrụ ihe jọgburu onwe ya na ijikwa usoro arụmọrụ ndị ọzọ. Ndị ụlọ ọrụ kwesịrị ime nnyocha sara mbara na ngwọta BI iji jide n'aka na sọftụwia anaghị eleghara ebe ndị ụlọ ọrụ ahụ kwesịrị inyocha anya.
5. Enweghị mmelite
Ndi oru ntukwasi obi kwesiri ntukwasi obi na - emepe mmelite na uzo di nso, dika ihe nchedo, os ndakọrịta mmelite, na ndozi ahụhụ. A isi ihe ịrịba ama nke a ogbenye nchịkọta sistemụ bụ enweghị mmelite, nke pụtara na ndị mmepe ngwanrọ anaghị agbanwe ngwaahịa ahụ iji gboo mkpa azụmahịa na-agbanwe agbanwe.
Mgbe a weputara ngwanrọ ngwanrọ, okwesiri ịkwado nchebe megide egwu dijitalụ ọhụrụ, ma debe data ụlọ ọrụ echedoro. Mmelite na-emeziwanye arụmọrụ na-arụ ọrụ, na-enye ndị ọrụ ohere iwepụta akụkọ ọsọ ọsọ, ma mepụta ozi dị mkpa karị. Kwesịrị ịlele ebe nrụọrụ weebụ ngwanrọ iji hụ ugboro ole a na-emelite ngwaahịa ha ma nwee echiche nke otu esi agbanwe agbanwe ugbu a.
6. Mwepu nsogbu
Ndị ụlọ ọrụ na-adabere n'ọtụtụ ngwọta ngwanrọ, gụnyere CRM ọdụ data, POS sistemụ, yana sọftụwia njikwa njikwa. Ọ bụrụ na nchịkọta enweghi ike ijikọ azịza ya na gburugburu teknụzụ gị, ị ga-egbusi oge na-agbalị iji aka gị weta data n'elu sistemụ ndị ọzọ.
Ndị ụlọ ọrụ kwesịrị ijide n'aka na ihe ngwọta BI jikọtara nke ọma na ngwaike ha dị, sistemụ arụmọrụ, yana mmemme ngwanrọ.
Dika ulo oru na emegharia na oge dijitalita site na idozighari usoro na uzo di elu, ulo oru nwere ike ibu ndi asọmpi ya na ezi Ngwọta BI. Ọ bụrụ na usoro gị dị ugbu a, nke dị larịị, nke ejiri data ọzọ, ma ọ bụ na-enweghị nghọta, oge eruola ka ị gbanwee na ngwọta ka mma.
Nke kacha mma nchịkọta ngwọta nwere ike ịkwanye ụlọ ọrụ n'ihu egwuregwu ahụ, na-enye ya ohere ịnabata usoro dị mma, hapụ omume na-adịghị arụ ọrụ, ma kwaga na ROI kachasị.